Kim Jon Un walaalkiis oo lagu dilay dalka Malaysia | SAHAN ONLINE
Kim Jon Un walaalkiis oo lagu dilay dalka Malaysia
Kim Jong Nam oo ahaa nin ay isku aabe ahaayeen hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ee Kim Jong Un ayaa shalay la sumeeyey xili uu ku sugnaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia.
Ninkan oo dilkiisa la baarayo ayaa la tuhunsan yahay in ay sumeeyeen laba haween ah oo ku sugnaa garoonka,ninkan ayaa muddooyinkii danbe Qurbaha ku noolaa gaar ahaana Shiinaha.
Kim Jogn Nam ayaa lagu waday in uu noqdo hoggaamiyaha dalka Kuuriyada Waqooyi markii uu dhintay aabihiis Kim Jong il oo sida la sheegay aad u jeclaa wiilkiisan,balse waxaa xilka kala wareegay walaalkiis ka yar ee Kim Jong Un oo isugu ay dhashay hooyo kale.
Ninkan la dilay ayaa in muddo ah mucaarid ku ahaa hoggaanka wadankaas ee Kuuriyada Waqooyi.
Tuhunka ugu weyn ayaa ah in dilka uu ka danbeeyo walaalkiis Kim Jong Un oo weli ka cabsi qaba in mustaqbalka uu ninkan khalkhal ku geliyo hoggaaminta dalkaas,iyadoo la sheego in qaar kamid ah militarize Kuuriyada Waqooyi ay taageero u hayeen ninka la khaarajiyey.
Kim Jong Nam ayaa wax kusoo bartay dalalka Japan iyo Switzerland.